दुबईको एयरपोर्टमा रोजगारको अबसर । फ्री भिसा फ्री टिकेट सहित मासिक तलब ५२ हजार माथि हुने - बैदेशिक पोष्ट
दुबईको एयरपोर्टमा रोजगारको अबसर । फ्री भिसा फ्री टिकेट सहित मासिक तलब ५२ हजार माथि हुने
in युएई, रोजगार
काठमाडौँ । यु.ए.ई.को बहुप्रतिष्ठित कम्पनि Saned Facility Management llc UAE मा नेपाली पुरुष तथा महिला कामदारको माग गरेको छ । Saned Facility Management llc UAE कम्पनिले विभिन्न पोस्टका लागि ३२७ जना नेपाली कामदारको माग गरेको हो ।
न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्ने छ । कामदारले हप्तामा ६ दिन र दैनिक ८ घण्टा काम गर्नु पर्ने छ । करार अवधि २ वर्षे रहेको छ । न्यूनतम तलब नेपाली रु. ३५,८०५ /- देखि ५२,०८०/- सम्म रहने कम्पनीको डिमाण्ड लेटर मा उल्लेखित छ ।
तलब खान बस्न सहित ५२ हजार माथि रहेको छ । इच्छुक कामदारले सपोर्ट ह्युमन रिसोर्स प्रा. लि. को कार्यालय सिनामंगल, काठमाडौँ मा मंसिर २४ गते अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ ।